Territory avete pamusoro 90 km southeast wokuPrague ari anenge rakatenderedzwa maguta: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Zelezny Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Railways uye Jicin. Iyo "mwoyo weBhohemian Paradhiso" inowanzoonekwa seVerov. Iko kunonyanya kukwirira kwenharaunda iyi Kozákov Mountain uye matongo eTrosky Castle. Rinokosha zvakare guta dombo, kunyanya Prachovské matombo, matombo Příhrazské, Hruboskalsko uye madziva, somuenzaniso. Žabakor, Komárovský kugungwa uye madziva ari podtroseckých podkosteckých uye mumipata.
Bohemian Paradhiso isiriwo nzvimbo yekuchengetedzwa kwenzvimbo nzvimbo, iripo kubva ku1955, ine zvitsva zvitatu zviduku zvisingabviri mukati memafungiro makuru ekufungidzira munzvimbo yeBohemian.
Maloskalsko Nature Park iri waidzivirira nzvimbo akazivisa 1997, riri panguva kwakadziva kumadokero pamuganhu kudunhu Jablonec nad Nisou Liberec nharaunda, pamwe iri pla Czech Paradise. Inogara pamabhanki ose eYizera rwizi, pakati pehupfumi hwakazadzwa nemataundi asinganzwisisiki edombo. Nzvimbo yekunamatira, maererano nepapi inonzi zita racho, ndiyo musha weMalá Skála.
Chinangwa kuzivisa ichi dzinongoitika paka zvakaguma kubva refu maturo kuedza kuwedzera kuchengetedzwa nzvimbo Czech Paradise ari makanzuru Little Rock, Koberovy, Frýdštejn, Líšný pamwe Pěnčín uye Zelezny Brod.
Inosangana nharaunda iyi inoumbwa neJizera River. Kubva Železný Brod kusvika Turnov, iyo inowedzera mumvura ine mvura yakawanda yakasviba iyo inopinda muchikamu chechipiri chePojizeří - Ještěd-Kozákov Ridge. Nzvimbo dzakakosha zvikuru, dzimwe nharaunda dzacho dzatova chikamu chekuchengetedzwa kwenzvimbo dzakachengetedzwa kana nzvimbo dzakakosha zvinhu, zvakabatanidzwa kune idzi. Suché skály NPP, Bučiny u Rakous, PR Ondříkovický pseudo-karst system. Kubudirira kwekugariswa kwemisha nemaguta kunopedza humiro chaiyo yehara ino.
Nzvimbo dzepamusoro dzenharaunda dzinotungamirirwa naVranovský hřeben uye Suché skály form form sandstone rocks. Part zvakasikwa paka levees Jizery dzakati chakafukidzwa nezvinomera uye vakwanise nharaunda maro wold zvinosanganisirawo rwizi uye chikamu kumawere pamwe vakawanda Madhaka nemikaha. Jizera inoshanda semugwagwa wekumusoro kwezvikomo uye zvisikwa zvitsuwa zvinzvimbo munzvimbo dzakaderera. Mune dzimwe nzvimbo, mupata we Jizera unopararira kuburikidza nemafuta e-thermophilous mumakomo.
Mhuka yepakutanga yemasikirwo emamiriro ezvinhu epanzvimbo iyi inomiririrwa nemiti yemiti yebeech, acidophilic uye boron oak masango. Rinokosha nonforest zvinhu zvipenyu zvinosanganisira waterlogged Mafuro, aimbova sandstone yamabwe, Valley Stream uye Vazoveckého nzvimbo nesafironi bělokvětého kuna Zaborci.
Tichifunga siyana chaizvo Geological substrate ari Maloskalsko.¨ uye pedyo chikamu Železný hariperi-siyana munharaunda uye mhando iyo vanobviswa relict zvinhu uye vakasara rezvinomera yepakutanga vakaramba panguva kashoma kuwana nzvimbo (Beech masango, nemipaini-pomuouki, dombo zvenyama, waterlogged Mafuro, namatsime, etc.). . Pakati rinokosha yemiti kukura pano semuenzaniso nesafironi tuberose, trigeminal mangwanani nekorari, polystichum lonchitis, patapata, Helleborine tsvuku, chena helleborine Orchid uye orchid. Sandstone dombo idzodzo dzinopa akakodzera mamiriro mazhinji shiri mhuka inokosha. Vanorarama Swallowtail, kukambaira muraraungu, salamander, buruuru, nedhambakura, slowworm uye zvakawanda pano.
Klokočské Rocks inzvimbo yakachengetedzwa ev. Kwete. 918 muJičín Hills, kumadokero kweKlokočí muSemily District muRiberec Region. Nzvimbo yacho inotungamirirwa neANCLP CR - Liberecko Regional Office. Nzvimbo yakachengetwa inowanikwa munzvimbo yeBohemian Paradhiso Yakachengetedzwa Kunzvimbo, nzvimbo yakakosha zvikuru kuKuputsa Jizera pedyo neAustria uye Bohemian Paradise Geopark.
Klokočské matombo wezvamatongerwe taundi dombo iri kumucheto kuesty akaenzana Goldstone sandstones of Upper Turonian kuna Coniacian, kuombekwa kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero. The yakakwirira (458 m) riri chaitika zvayakaita denudačním kumabvazuva. Kuesty zvishomanana STRUCTURAL kuwedzera nechepakati uye kuchamhembe kwakadziva kumadokero chikamu rinokamukana sufozní vakawanda sinkholes, uri mawere materu akasimuka shongwe, mbiru uye dombo masvingo vane zvitarisiko sezvo simba regiravhiti odsedání úpatními mirwi. Munharaunda yakatanga dombo niches, ekunyebera mumapako (vazhinji vavo vari zvakare chinokosha arkeologia) uye howa matombo. Matombo anowanzove akavezwa nemiti yemapine, dzimwe nguva nemiti yemiti. Kumumhembe kwakadziva kumabvazuva kune matongo eR Rotštejn Rock Castle. Kune zvikwata zvinokwira. Kubva mutsetse dombo tenuka nezvatinovavarira NW-SE maonero kure mhiri kuchamhembe makomo Rovno muforo.
Zviri paupamhi asymmetric pakukwirira mu kunonyanyisa kukurudzira antiklinálního bazaltandezitového (melafyrového) of okumusoro mwero dzakatenuka kumabvazuva (15-20 °) uye sandara yepamusorosoro migove pamusoro dhaka ichiyerera Neogene olivine basalt (basalt), pashure ichiyerera seri kumaodzanyemba kumabvazuva. Panguva yepamusorosoro uye steeper yokumadokero materu inosimbiswa tectonic inoperera sandstone (Max. 667 m) namasvingo muganhu, dombo shongwe, niches, nomumapako, úpatními zidombo mirwi. Ichitsvaga uye basalt slopes ndiyo mitsinje yehombe uye gungwa rine dombo.
Pasi kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwetambo kune nzvimbo yakazara yakawanda inofadza inonzi Votrubec Quarry. Iyo iri yoga yeVotrubka, uye inosanganisirawo kamana kamu Museum of Precious Stones. Kana uchida mari shoma, zvinokwanisika kuvhara mumakori uchishandisa zvikwereti kunyange nanhasi kuti uwane matombo akaenzana-anokosha, ayo muridzi anogona kugadzira ipapo.
MuMiddle Ages, vakapenya paKozák chiratidzo chemoto. Gare gare mapoka ezviuru zvevanhu akaungana pano. Panyaya ye1901, mufananidzo we Turnov, Jan Prousek, akaronga kumusoro kwechivako kana neo-Romanesque chapel of St. Cyril naMethodius kana kupfuura anopfuura mamiriyoni XMUMX kumusoro kweSlavic mound pamwe nemapanga ekuberekwa akasimwa nematombo emiprecious. Mushure mokuberekwa kweCzechoslovakia, 20 yakapiswa gore negore. Mbudzi yeOctober. Mushure mekufa kwaFranz Ladislav Rieg we28, pfungwa yacho yakaberekwa kukudza chiyeuchidzo chake kuburikidza nekuvaka maRounds a Rieger. Gore rakatevera, "Rieger Mound Construction Team" yakatanga kubudirira munyika yose. Gare gare, pfungwa mbiri dzakakwikwidzana: dutu kana mausoleum neimba inotakura neresitorendi uye chigaro cheRiegrov. Rudzi rwechipiri rwakatorwa neCzech Tourists Club. Nheyo yekona yekamba yakaiswa ne 1903. August 29. Imba yacho yakavakwa kubva kuhomwe, zvipo nemipiro kubva kumataundi ari pedyo. 1926 yakavhurwa zviri pamutemo. June 24. Munguva yeHondo Yenyika Yechipiri, dzimba racho rakanga rakagara neGermany uye neuto reCzechoslovakia. Mushure meFebruary 1928, dzimba racho rakasarudzwa munyika ndokuendeswa kuIkudya uye Kudya. Muna May 1948 hut yakapiswa. I1964 Club yeCzech Tourists mumusha weSemily muhurumende yemakore gumi yakatenga iyo kubva kuhurumende. Pachine 1994, musara wemamita 1995 nechitarisiko chepamusoro pamamita 40 yakavhurwa kumusoro. Nhandare yakatarisa inoshandawo sechitsiko cheterevhizheni chesimbi yeuto, mapurisa, uye vanoisa moto. Kubva 24, Kozákov chikamu cheBhohemian Paradhiso Yakachengetedzwa Munzvimbo. Mukati re 2002, imba yeRierger yakavhurwa zvakare mushure mekuvakazve. Murindi wemutariri anopa maonero eBhehemian Paradhiso, Pojizeří, České středohoří, Mountains Giant uye Makomo eLusatian, Ještěd, Krkonoše, Podkrkonoší, Broumovská vrchovina, Orlické hory uye pamwe uyewo makomo emakomo eGohemian-Moravia.
Nzvimbo Yakachengetedzwa Příhrazské skály yakaziviswa 1999 gore uye iri kumaodzanyemba uye kumadokero kwemusha Příhrazy mudunhu reMladá Boleslav. Chikonzero chekudzivirirwa ndechimwe chinhu chakakomba chemasango, masango uye mashoma-masango emasango emunharaunda, nzvimbo dzinoshandisa nzvimbo dzakakosha.
Nzvimbo iyi yakaoma mizinda ine matombo iri pamucheto wegungwa dombo rejecha. Iyo inonyanya kukosha ndeyekugadzirwa kwedombo kunonzi musoro waKobylí. Pakati peguta redombo pane Hlinstas yakavezwa. Iyo iri mu17. zana remakore rakashanda senzvimbo yekuchengetera hama dzeCzech. Munzvimbo iyi pane zviduku zveimba ye 13. zana remakore.
Příhrazská vrchovina inowira pasi paVyskeřská vrchovina Highlands muJečín Hills. Nzvimbo yepamusoro yenzvimbo ine 463,5 m ndiyo Mužský hill. Ichi chinyorwa chisina kukonzerwa chemuti wemuinevine nepheline mutsipa we tectonic inenge hafu yedigiri yakakotamira kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva. Izvi zvakawanikwa nekuenzanisa zvikomo zve cuboid sandstone pamusoro uye nehuwandu hwezvitubu zvemvura kubva pane nheyo dzavo. Mifananidzo yakare-kare yePříhraz Highlands ndiyo yakakwirira-yakasara yenzvimbo yakarongwa. Dombo rePříhrazské Rocks rinosanganisira 178 Tower. Vakawanda vavo vanomira pamucheto kwezvikomo zveCanyon kumusoro kwetectonic shrub. Iyo yapamberi yakasungirirwa nechepakati yemasikirwo emasikirwo maererano nehutambo hwekukanda shear. Nzvimbo huru pane dzose dzakapfuura zvakaitika muna June 1926. Somugumisiro, chikamu chikuru cheMusha weDneboh chakaparadzwa uye mugwagwa weruwa weOlšina wakakuvara.
Somugumisiro wekutsvaira kwemavara-dema, kuputika mune zvivako kwakawedzerwa, zvichibvumira kuumbwa kwezvibairo. Tinovawana muPříhrazské matombo anenge makumi matanhatu. Iyo inonyanya kuzivikanwa ndeye pseudocross gorge ine chitubu chinopfuurira kusvika pakadzika kwe22,5 mamita. iyo yakawanikwa muna 1960, uye iyo yakaderera makore maviri gare gare, mufambiki Gustav Ginzel, muridzi weZieji Manure House anozivikanwa, akadzika. Mumipata yeCanyon yeChtola neVlčí Důl, tinogona kusvika pamasuwo eguta, mabwe ematombo nemapako. Krtola Cave, inonziwo Sklep na Chodove, ndiyo ibako guru reBohemian Paradhiso. Iyi 40 mamita refu refu yakatanga kuongororwa mu 80. makore 19. muchechi wezvokuchera matongo wezana remakore wezana Josef Ladislav Píč.
Iko kune nguva yakawanda groove uye iron yakavezwa. Tinogona kusangana pano nematombo. Pane ari vakaumba shava zvine ivhu (Cambisol eutrophic) pamwe Rankers (kwese uye litickým) uye sandstones arenosoly asidhi (s Cambisol arenická podsol arenickým). Waterlogging pseudogleys zvinzvimbo (a sizing uye kwese) pamwe guruu (yemanyorero munhu organozemním) chikamu kuchengeterwa uyewo organozem sizing.
Nzvimbo dzakachengetedzwa dzinotungamirirwa nemasango ane huwandu hwemasango emasango. Pine nomudondo pamisoro pamatombo, kukakanganiswa thermophilic memuouki huni loess munhare yekare, uye marara dondo pazasi yepamusoro Male, apo inokura perennial (Lunaria rediviva), pokutanga pakati chinokosha vavo. An dzinonakidza nguva ndicho chitsuwa inowanzorimwa uswa Ivan Stipa (Stipa Joannis) pamusoro matombo rwenze castle. Ndiyo nzvimbo yekupedzisira inozivikanwa yethemophysics munharaunda iyi yeBohemian Paradhiso. Mukuwedzera kwazviri, mamwe maitiro anofadza anonzi thermophilous akaonekwa. On Drábské světničky achikura Cotoneaster (Cotoneaster integerrimus). The Ivan Kuchin anogona kuwanikwa mumipata Beech spruce admixture pamwe dzinongoitika dombo masvingo uye anomira Vranča emisipiresi (Huperzia selago) uye Lycopodium Annotinum (Lycopodium annotinum). Kubva pane zvinyorwa zvebhodhoro, Krtola ndiyo gorge yakakurumbira.
Pakati pekuchengetera kumaodzanyemba kweBobššenec pond, kune chiitiko chisingakanganwiki Dub pane Oběšence.
Hruboskalsko Nature Reserve iri munzvimbo yeLiberec yemakiromita 3 kubva muguta re Turnov. Inorara pakati pemisha yeSedmihorky, Hrubá Skála uye Kacanovy. Kureba kwayo iri pano pakati pe265-420 m Hruboskalské dombo reguta ndiro dombo rakakosha zvikuru muguta riri muBohemian Paradhiso Protected Landscape Area.
Kuumbwa kwemataundi ematombo kwakakamurwa kuita zvikamu zvina. Yokutanga ndiyo gadziriro yekugadzirira iyo muviri wejecha uri pasi pepasi. Somugumisiro wekuita kwepasi pasi, kuumbwa kwenjodzi yakaoma ye sandstone inopoteredza sandstone yakasviba. Panguva ino, simba reA Ice Age panguva iyo fissures dzakaputsika dzainge dzava kupera. Chikamu chinotevera chikamu chekutanga chinoratidzwa nekutora tectonic nekukura. Mugumisiro wepurazi rakatasva riri pakati peBohemia ne sandstone gorges. Chikamu chechitatu chikamu chakakura chinoitika mushure mekuguma kwekumusoro kwetectonic. Panguva iyi, marudzi akasiyana-siyana weathering anodzivirira kupa crusts akavhuniwa exfoliating flakes, vanotevera micheto padombo masvingo uye anogona kuva Ukobvu kusvikira 1 m. Yokupedzisira chokutambudzika ndiyo Pasika kukwegura, inosanganisira kuparadzwa padombo idzodzo. Kuparadzwa ndiko kunowanzokonzerwa nekufamba kwematombo, matombo ane matombo uye maguta ane ruvengo. Nokudaro, tinogona kuona guta redombo sechinyorwa chezvakasiyana siyana zvekare. Iri dombo guta, kufanana nevamwe vari munharaunda yacho, rave richiri kuwedzera 18-20 kwemamiriyoni emakore.
Mamirire mhando makwenzi miriwo rukoko kunonyanya bilberry tsvuku (Vaccinium myrtillus), Heather (Calluna vulgaris), tsvuku whortleberry (Rhodococcum Vitis-idaea), Deschampsia flexuosa (Avenella flexuosa), bracken (Aquilegia vulgaris) uye bika bvudzi (Luzola pilosa) . In nemakoronga nyorova kazhinji tinowana yeAustria Fern (Dryopteris carthusiana) nezvakarurama Fern (Dryopteris dilatata). Typical ndiko pamberi petsanga (Carex) uye zvakajairika rutsanga (Phragmites australis), kunyanya kumativi diki dondo madziva. In mipata pa zvitubu, matsime dzinowanzotaurwa horsetail pakukura (Equisetum telmateia) .One of kuchengetedzwa yemiti kazhinji kuitika trichomanes (Trichomanes speciosum). The kupfuura matambudziko invasive kwemarudzi ndiko Eastern chena nemipaini (Pinus srobus) kuti kuisa pangozi zvinhu zvipenyu zviri relict mupaini masango. Paiva wakasimwa uye zvimwe kukura nokukurumidza muti mhuka dzakadai tsvuku pomuouki (Quercus in rubra), European larch (Larix decidua) uye chikuru emisipiresi (Abies grandis).
Pane zvinokambaira maviri, Hamukurumidzi (Anguis fragilis) uye nyoka (Natrix natrix) uye marudzi maviri amphibians, buruuru (Bufo Bufo) uye datya (Rana temporaria). Dombo reguta rinoita kuti zvinhu zvive zvakanaka kune shiri dzinogara. Saka kure, kwakawanikwa 73 shiri marudzi uye 62 zvipenyu zviri kunyange nesting.  Pazvinhu zvakawanda zvinosanganisira Kestrel (Falco tinnunculus), kuti tawny zizi (Strix aluco), chaffinch (Fringilla coelebs), redstart (Phoenicurus phoenicurus), Jay (Garrulus glandarius) goldfinch (Carduelis carduelis) magpie (pica pica), shiri (unopfuura montanus) manyoro Woodpecker (Picus angusticeps), bellflower (Carduelis chloris). Pakati dzakachengetedzwa shiri zvinosanganisira nenyenganyenga (Hirundo rustica) Common Swift (Apus apus) zizi (Bubo bubo), Raven (Corvus corax) Jackdaw (Corvus monedula), mechanism (Ficedula parva).
Ikoko vaakawana 14 mhuka - nembira (Meles meles) European Chidembo (Talpa europaea), nemipaini the marten (Martes martes), nemipaini the marten (Martes foina), kuti gava (Vulpes vulpes), mouflon (Ovis musimon), yellow mikukutu mbeva (Apodemus flavicollis), bhengi vole (Clethrionomys glareolus), mhuka musii (Vos scrofa), shrew (Sorex araneus), nemharapara (capreolus capreolus), tsindi (Sciurus vulgaris), tsuro (Lepus europaeus) uye chiduku chidhongi nechiremwaremwa ( Rhinolophus hipposideros), iyo inonyanya kuisa pangozi pano. Vagari varo vanosanganisira 150-300 vanhu. The anowanzodanwa kuitika invertebrates munharaunda anosanganisira crosshead temnostní (Meta menardi) Cicindela campestris (Cicindela campestris) ammophila sabulosa (ammophila sabulosa) svosve shumba romuzvarirwo (Myrmeleon formicarius), ngoko nemipaini (Spondylis buprestoides) gwayana dazule (Acanthocinus aedilis) . Ikoko kunewo butterfly isingawaniki (Callimofpha dominula).
Chikonzero chekuchengetedzwa ndiro dombo rinokosha kupfuura rimwe dombo muParadhiso yeBohemi neine zvinyorwa. Iko kunewo dzimwe mbeu dzakawanda dzakachengetedzwa nemhuka. Semuenzaniso, simiti iyi inonzi perennial hairpin (Trichomanes speciosum) uye Rhinolophus hipposideros inonyanya kuisa pangozi. Nharaunda yenzvimbo yakachengetwa iri chikamu cheBhohemian Paradhiso Yakachengetedzwa Nzvimbo, iyo yeHurumende yeZvivirirwa Nzvimbo Yenharaunda yeBohemian Paradhiso. Kudzivirirwa kwenharaunda yakabatanidzwa muChirongwa chekuchengetedza PR Hruboskalsko. Dambudziko guru rekudzivirira rinosanganisira kukwevera chifukidzo chezvirimwa kubva pamatombo, kukanganisa nzvimbo kubva mumugwagwa nekukuya matombo nekukwira makambo.
Hruboskalské dombo reguta nderimwe nzvimbo yepamusoro yokukwirira. Ikoko kwakanga kune yekutanga yekuzvimirira Czech yekutanga kupinda mu 1928 pane Anebo tower, iyo yakaitwa naKarel Čabelka nevashandi pamwe navo Bausys naNáhlovský. Kukwira pamusoro pejecha kwaizonzi kwakanaka kugadzirira gomo. Munguva yehondo, Joska Smítko akanga achivanza muHruboskalsko, iyo yakachinja zvikuru sandstone yakakwira kuSczech uye yakazova muenzaniso kune vamwe vakawanda vakakwira. Mushure mehondo Hruboskalsko yakava pakati peCczech sandstone kukwira. Kufarira kukwidza kuBohemia kwakaderera zvikuru mushure megore ra1989, apo mikana yekufamba kune dzimwe nyika yakazaruka, asi nhasi iri kubuda zvakare. Chikamu cheHruboskalský Rock City inzvimbo yekufananidzira, iyo yakavakwa pakutanga nemafungiro ekuumba chirangaridzo kune vanosimudza vakaparara mumisasa yevasungwa panguva yeHondo Yenyika Yechipiri. Pakupedzisira yakazova chivako kune vamwe vanofamba makomo avo vakaparara mumakomo.
Trosky (514 M pamusoro pegungwa, pamepu Zvinonzi kukwirira 488) vari neovolcanic chikomo pamwe Castle hunoparadza Trosky wo akadana pla Czech Paradise, inenge pakati Turnov uye Jicin, cadastral Municipality muruwa Troskovice Semily Liberec nharaunda. Ungwandangwanda chiratidzo pakati Bohemian Paradise uye kumwe akashanyira nematende muCzech Republic. Munzvimbo dzepamusoro dzechikomo pane nzvimbo yakachengetedzwa yechitubu chechisikigo Trosky. Nharaunda yacho ndiyo nhare yakakwirira yeVyskeřská Highlands.
Kukanganisa ndiko kukanganiswa kwekukura kwee slag cone. Kusarudza kukurwa kwevhu akatora unorema pyroclastics nokusunungura wedzerai mapatya chamber vaimbova anoputika monogenic kuumbwa tsindirana basanites (rudzi basalt). Mukati pakati pemasvingo maviri kune imwe nzvimbo yebhasandite iri pasi-horizontally yakaiswa sarb ine chikamu chakatsauka chinoparadzana. Ichi chidimbu chinomiririra relic yemvura yakabuda mumwana. Makomba akabatanidzwa akaremberedzwa nezvigaro zvezvigaro zvepa pyroclastic. Kuisa pasi hakusi kuumbwa, asi kunonzwisisika kubva pakugadzirwa kwezvinyorwa zvekuti slag yakaiswa pasi pamusoro pomufananidzo we slag cone. Chiyero chekuparadzana uye nguva yakawanda yezvimedu zviduku zvinopindirana nehutachiona hwekuputika. Bazanit z Trosek yakanyorwa kuna 16,5 kwemamiriyoni emakore. Basa iri rakatanga nekusikwa kwaBaba slag cone, iyo yaifambidzana ne lava discharge. Pakazoitika, chinzvimbo chebasa chakatamira zvakanyanyisa kumabvazuva, zvichiumba hanzvadzi koni yeMhandara. Pomugove nzira chinopinda Virgin relict mabota rukova chokuita cône mwana uye ichi mabota gang Mhandara bindepinde. Basa racho rakabva raenda mberi kumabvazuva, uko 20 yakanga iri, maererano nezvapupu, kusvika kuma1940. mazana emakore-akasiyana nedombo rebasandite rakange rabudiswa. Two dombo shongwe dissected soupouchu ukomba yomuka vakanga modeled kuwedzera anthropogenic mabasa periglaciálním chando weathering: chando mawere, makatsemuka padombo columnar kuparadzana mugove. Pamusoro pemakungwa marlin slopes pakagadzirwa soroflucation rubble yakagadzirwa. Kune nzvimbo yakawanda yejecha rekugadzirwa nematombo mumatombo ematope (dombo guta - Apolena Nature Reserve kumaodzanyemba-kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva). Iyo nhokwe inowanzove yakakomberedzwa nemiti yemipine, dzimwe dzayo dzinomirira maruva uye bhendi.
Prachovské skály jsou skalní uskupení pískovcových útvarů různých tvarů, rozkládající Se zhruba 5 až 7? Km severozápadně Od ß Jičín, přírodní rezervace, součást CHKO Česky Raj ane oblíbený cíl turistů. Vznikly ndima období druhohor jako usazeniny Na okraji meri.
Pane zviwanikwa zvekuchera matongo zvichiratidza kuti vanhu vaigara pano munguva dzekare kare dzeMatombo Age. Nzvimbo yose yematombo yaiva nhare yakasikwa yevaSlavic, nzvimbo shomanana chete yakazara nemipata. Mukati, kugadzirisa kwekutanga kwakagadzirwa.
Pamwe nokuguma kwe13. IVelis Castle yakavakwa pane imwe yezvinyorwa zvebasalt pamwe chete neVeliš manor. Makumi emakumi emakore gare gare, iyo nzvimbo yakaiswa munzvimbo yeVartemberk, uye nzvimbo dzakasiyana-siyana dzakasikwa pamagumo e15. iyo Trčková yeLípa inotaurwa pano seimba. Pakutanga kwe17. nzvimbo yezana remakore yakatorwa naSmiřičtí kubva kuSmiřice, asi mu1625 nzvimbo yacho yakatorwa nemhuri yeWallenstein uye yakaiswa kuFrýdlant duchy yayo. Mushure mokunge matongo eimba yacho akaparadzwa, misha iri mumatombo yakanyangarika.
A Danho idzva kunotanga 1637 apo munda wakanga paakavapa Colonel Henry Slik of County mhuri Šlik nezvinhu muWestern muBohemia, uyo kwaitsigirwa kuna vakakwirira parutivi mambo Sigismund. Rod Šliky ane dzimba dzomunharaunda kusvikira kudzidzira mu 1948.
1866 yaiva imwe yehondo yePrussian-Austrian pedyo nematombo, ayo vaPrussia, kunyange zvazvo vashoma, vakakunda.
Kubva pakuguma kwe19. muzana remakore, matombo akazova chinangwa chevari kukwira uye vatashanyi. Muna 1933, vakava nzvimbo yekuchengetedza nyika.
Mumhosva yekudzorera, mhuri yeEliliky yakawana nzvimbo ye1993 zvakare uye yakatanga kushanda maitiro ane chokuita nekushanyirwa kuno. Kuenda kune vanhu vose kunofungidzirwa ku 300 000 vanhu pagore.
Nhamba yekutanga yekunyora kwese yakaoma yematombo yakaitika kare mu 1874. Purofesa weChičín chikoro chechirongwa Antonín Zefyrin Maloch akaita urongwa hwakajeka achishandisa kambasi uye nzira yekufamba. Chigumisiro chebasa rake chaive chokuve nemepu yakazara yakanga isati yapera. Migwagwa yekutanga uye maumbirwo anokosha ematombo akanyorwa nevadzidzi va1879 Maloch, avo, maererano neurongwa hwake, vakaronga mapu ePrachov Rocks.
Rocks yakafaridzirwa norwiyo rwaIvan Mladek nezita rimwe chete.
Iye zvino pane maziso matatu ekuona nzvimbo dzevashanyi. Nguva yevashanyi iri pano kubva ku1. April kusvika kumagumo eOctober. Kuwanika pamatombo kunoenderana nemari. Madzimambo ane sarudzo yekutenga tikiti pamutengo usingabhadharwi, uye vanogona kuenda kunze kwenzira dzakasarudzwa, asi vanofanira kunge vari nhengo dze CHS kana UIAA. Mumatombo kune vazhinji vanogadziriswa, zvakasiyana mazita matariro. Pakati pematombo mune nzvimbo yekushambira inonzi Pelíšek.
Castle Pařez - dombo reimba.
21 maminitsi yapfuura
22 clock yapfuura
Jinolice uye Jinolice madziva kubva ku Prachov Rocks